सरकार खोज्दै लगानीकर्ताको लाल्टिन जुलुस, कोइरालाको अनशनलाई समर्थन गर्दै दलका नेताहरु - Arthik Sansar :: Nepal's Leading Economic News portal. – Arthik Sansar
३ असार २०७९, शुक्रबार १७:२८
Homeराजनीतिसरकार खोज्दै लगानीकर्ताको लाल्टिन जुलुस, कोइरालाको अनशनलाई समर्थन गर्दै दलका नेताहरु
पुँजी बजार सुधारका लागि अनशन बसेका लगानीकर्ता संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइरलालाई समर्थन गर्दै लगानीकर्ताहरुले लाल्टिन जुलुस निकालेका छन् । बिगत तीन दिनदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि अनशन बसिरहेका संयोजक कोइरालाले राखेका माग पूरा गर्न सरकार असमर्थ भएपछि सरकार कहाँ छ भन्दै ब्याङगात्मक रुपमा लगानीकर्ताहरुले लाल्टिन जुलुस निकालेका हुन् ।
लगानीकर्ताले बोर्ड अगाडिबाट सातदोवाटोसम्म लाल्टिन र प्याम्प्लेट बोकी चर्को नारा लगाउँदै पुगेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले ‘स्थिर ब्याजदर लागु गर,’ ‘४÷१२ को नीति खारेज गरे,’ ‘नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर’ जस्ता नारा लगाएर प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।
अनशनरत कोइरालाको मागप्रति समर्थन जनाउँदै राजनीतिक दलका नेता पनि उनी अनशनरत स्थल पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले अनशनरत कोइरालाई भेट गरेका छन् । यसैगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी भट्टराई, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाहलगायतका व्यक्तिहरु अनशनरत कोइरालाई भेट गरेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले राखेका माग पुरा गराउन मुलुकभरका लगानीकर्ता एक जुट भएका छन् । पोखरा, गुल्मी, पर्बत, मोरङ लगायतका लगानीकर्ताहरु पनि १९ बुँदे माग लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । पुँजी बजार सुधारका लागि १९ बुँदे माग सहितको काठमाडौंमा भइरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
लगानीकर्ता सँघर्ष समितिले १९ बुँदे माग राखेर गत सातादेखि नै आन्दोलन जारी राख्दै आएको छ । समितिले धितोपत्र बोर्डमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो । सो पश्चात दैनिक रुपमा नै लगानीकर्ताले माइतिघर र सातदोवाटोमा विरोध प्रदर्शनी जारी राख्दै आएका छन् ।
असार १ गतेदेखि भने लगानीकर्ता तिलक कोइराला धितोपत्र बोर्ड अगाडि आमरण अनशनमा बसेका छन् । उनले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म आनशन नछोड्ने बताएका छन् ।
संघर्ष समितिले आयोजना गरेको उक्त आन्दोलनमा लगानीकर्ताका अन्य संघ संगठनहरुले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
समितिले केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगाएको ४ र १२ को सिमालाई संशोधन गर्नुपर्ने, सिडि रेशियो हटाएर सिसिडि रेशियो नै कायम गर्नुपर्ने, शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने लगायतका १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन थालेका हुन् ।
Previous articleअमेरिकीले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने छ : प्रेम सुवाल
Next articleसेयर बजार ७.५७ अंकले घट्यो